January 2015 - Myanmar News Plus
မနက်စာ၊ အဆာပြေလုပ်စားနိုင်ဖို့ ၀က်နံရိုးပေါင်း ဆီချက်ခေါက်ဆွဲပါ။ ၀က်နံရိုးကို အရိုးပါ စားလို့ရသည့်အ ထိ နုအိသည်အထိ ပေါင်းထားတာပါ။ အရမ်းစားကောင်းတာမို့ ခုပဲ တူတူ လုပ်စားကြည့်ရအောင်… ဆီချက် ခေါက်ဆွဲတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဂျုံခေါက်ဆွဲ – ၂၀၀ ဂရမ်ကြက်သွန်ဖြူ – ၃မွှာ(နှုတ်နှုတ်စဉ်းပြီ ဆီချက် ချက်ပေးပါ)ဆီချက် (သို့) ၀က်ဆီချက် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်းကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း (ပါးပါးလှီးပါ)ပဲငံပြာရည်(အကြည်) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းအချိုမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က် နံရိုးပေါင်းတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၀က်နံရိုး – ၅၀၀ ဂရမ် (၁လက်မခွဲ အရွယ်များပိုင်းဖြတ်ပေးပါ)ဟင်းရွက်ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းကြက်သွန်မြိတ် – စည်းဝက် […]
ကိုရီယား ၀က်သားကင်အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်ကင်စားချင်သူများအတွက် ကင်နည်း
ကိုရီယား စတိုင် ၀က်သားကင် လေးပါ။ ကိုရီယား ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ဆလတ်ရွက်ထဲ ၀က်သားကင်၊ ငရုတ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ ထည့်၊ ဆလတ်ရွက်လေးနဲ့ ထုပ်ပြီ စားတာ မြင်ပြီကတည်းက စားချင်နေတာ။ ခုမှ လုပ်စားဖြစ်တော့တယ်။ မိသားစု နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အတူလုပ်စားမယ်ဆိုရင် အရမ်း ကောင်းတဲ့ ၀က်သားကင်လေးပါ။ ချက်နည်းလေး ကြည့်ရအောင် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၀က်သား သုံးထပ်သား – ၃၀၀ ဂရမ် (ခပ်ပါးပါးလှီးပေးပါ) ဆလတ်ရွက် – ၁စည်း (ရေစင်အောင် ဆေးထားပါ) ငရုတ်သီးစိမ်း တောင့်ရှည် – ၁ခု (ပါးပါးလှီးပါ) ကြက်သွန်ဖြူ – ၄ခု ( အရှည်ပါးပါးလှီးပါ) နုပ်ထားရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ သစ်တော်သီး – ၁လုံး […]
Yoogane ရဲ့နာမည်ကျော် ကြက်သားဂါဘီဟင်းလျာ မျက်မြင်ချက်ပြုတ်ပေးတယ်
ကမာရွတ်ပရိသတ်အတွက် မြောက်ကိုရီးယားစားသောက်ဆိုင်ကို မိတ်ဆက်ပေးဖူးတာမို့ ဒီတစ်ခေါက်တော့ တောင်ကိုရီးယားက နာမည်ကျော်Yoogane စားသောက်ဆိုင်ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ၁၉၈၁က တည်းက ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၂ဝဝကျော် ဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံးဆိုင်ခွဲကို ၂ဝ၁၄ အောက်တို ဘာမှာ ဖွင့်ခဲ့ပြီမို့ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေရလဲ စိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။ စားသုံးသူတွေရှေ့မှောက် ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်ရောင်းချပေးတဲ့Yoogane ဆိုင်မှာတော့ လတ်ဆတ် သန့်ရှင်းမှု၊ ပူပူနွေးနွေး သုံးဆောင်နိုင်မှုတွေနဲ့ စားသုံးသူတွေကို ဆွဲဆောင်နေတာပါ။ ယူမျိုးနွယ်ရဲ့ နာမည် ကျော် Sauce ကိုသုံးပြီး ကြက်သားကိုအဓိကထား ရောင်းချတဲ့ ဒီစားသောက်ဆိုင်မှာ လူကြိုက်များတဲ့ အစားအစာကတော့ Marinated Chicken Galbi လို့ခေါ်တဲ့ Yoogane ကြက်သားဂါဘီဖြစ်ပါတယ်။ ပုလဲကွန်ဒိုနဲ့ Junction Mawtin မှာ ဆိုင်ခွဲ ၂ခုဖွင့်ထားတဲ့ Yoogane ဆိုင်ရဲ့ […]
ပျဉ်းမနားမျှစ်ချဉ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ထုတ်ကြရအောင်
ပျဉ်းမနား-နေပြည်တော်ကနေ အိမ်အပြန်လက်ဆောင်အဖြစ် ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ အများဆုံး ဝယ်ယူ လေ့ရှိကြတဲ့ ပျဉ်းမနား ဝါးပိုးမျှစ်ချဉ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာလဲ။ မျှစ်ချဉ်တွေကို လနဲ့ချီပြီး သိပ်ရတဲ့အချိန် ကာလ၊ မျှစ်ချဉ်သိပ်ရာမှာ အဓိကအကျဆုံးအဖြစ်တဲ့ သန့်ရှင်းမှုအကြောင်း ဒေါ်ခင်နန်းမြင့်က ကမာရွတ်မီဒီ ယာကို ပြောပြပါတယ်။ ပျဉ်းမနားမှာ အထင်ကရနာမည်ရနေတဲ့ ခိုင်သစ္စာ မျှစ်ချဉ်လုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်နန်းမြင့်က မျှစ်ချဉ် တွေကို ဘယ်လိုသိပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးမှာပါ။ မျှစ်သား မနုမရင့်အနေအထားရှိတဲ့ အချိန်ကာလဟာ ဇူလိုင်နဲ့သြဂုတ်လတွေဖြစ်ရမယ်။ ဒီကာလဟာ မျှစ်ဝယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ချိုးပြီးသားမျှစ်တွေကို သိပ်တော့မယ်ဆိုရင် မျှစ်သိပ်ထည့်မယ့် ကန်ထဲမှာ မိုးကာအထူ အကြည်ရောင်ကို လေမဝင်အောင် လေးထပ်လောက် ကာရံထားရမှာဖြစ်ပြီး မျှစ်ကုန်သည်တွေဆီကရတဲ့ တစ်ပတ်လောက် သိပ်ထားပြီးသား မျှစ်တွေကို ဆား၊ ထမင်းရည်နဲ့ ဓာတုဆေးတွေ လုံးမမပါဘဲ […]
ရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့ဆူရှီ တွဲဖက်ရောင်းတဲ့ လှည်းတန်းက 81
မြို့ပြရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခေတ်ရေစီးထဲမှာ ရှင်သန်ကြီးထွားနေကြတဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေ အကြိုက်တွေ့စေ မယ့် ရှမ်းရိုးရာအစားအစာနဲ့ ဂျပန်ဆူရှီတို့ကို ထူးထူးခြားခြား တွဲဖက်ရောင်းချတဲ့ 81 ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင် လေးလှည်းတန်းက ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းထဲ ဖွင့်လှစ်လိုက်တာ ၁ဝရက်ကျော်ကျော်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ စားသောက်ဆိုင်အနေနဲ့ရော ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအနေနဲ့ပါ ပထမဆုံးလုပ်ဖူးတာကြောင့် ဆိုင်နေရာအတွက် ရောလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအတွက်ပါ အများကြီးခက်ခဲခဲ့ပါတယ်လို့ လူငယ်လုပ်ငန်းရှင် ကိုစိုးကိုက ပြောပါ တယ်။ ကုမ္ပဏီအလုပ်မှာ ငွေမစုမိတာမို့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ဒီကနေ့ ခေတ်မှာ လူကြိုက်များတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့ဆူရှီကို တွဲဖောက်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါလို့ ဆိုပါတယ်။ 81 စားသောက်ဆိုင်မှာတော့ ဆူရှီနဲ့အတူ မြင်နေကျ ရှမ်းစာတွေရနိုင်သလို ဆိုင်တော်တော်များများမှာ မရနိုင်တဲ့ မြေပဲတို့ဟူး၊ ၁၂ပန်းနား အာလူးကြော်၊ အော်စွန်းသုပ်၊ Small ပေါက်စီပေါင်းနဲ့ပေါက်စီကြော် တွေလည်း […]
လက်လုပ်ဂျုံခေါက်ဆွဲစစ်စစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့ Ureshi Kitchen
ဂျုံမှုန့်တစ်မျိုးတည်းနဲ့လုပ်ထားပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်၊ သဘာဝအနံ့အရသာနဲ့လည်း ပြည့်စုံတဲ့ လက်လုပ်ခေါက်ဆွဲစစ်စစ် စားသုံးချင်သူတွေအတွက် နာနတ်တောနဲ့ ကျွန်းတောလမ်းထောင့်ကပျော်ရွှင် မှုလို့ အဓိပ္ပာယ်ယူနိုင်တဲ့ Ureshi Kitchen မှာ ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ ရနိုင်ပါပြီ။ စားသုံးသူတွေကို ပျော်ရွှင်စေချင်လို့ Ureshi လို့နာမည်ပေးထားတယ်လို့ စတင်ရှင်းပြလာသူက စားဖိုမှူး မောင်လှပါ။ သူတို့ဆီမှာ ရောင်းချတဲ့ Ramenတွေကို ဆား၊ ဆိုဒါမပါဘဲ မြန်မာဂျုံမှုန့်စစ်စစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်လုပ်ခေါက်ဆွဲစစ်စစ်ပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ကြက်ဥလည်းမသုံးဘဲ ဂျုံမှုန့်နဲ့ရေပဲ သုံးထားလို့ သက်သက် လွတ်စားသူတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေမှာဖြစ်လို့ ခေါက်ဆွဲပြုလုပ်ပုံကို သူက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။ စားသောက်ဖို့ မှာယူတဲ့အချိန်ကျမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဖြတ်တောက်ပေးတာဖြစ်ပြီး အသင့်လုပ်ခေါက် ဆွဲတွေနဲ့ အရသာလည်းကွာသလို သူတို့ဆိုင်မှာ လူကြိုက်အများဆုံးကတော့ ဂျပန်ပဲပိစပ် အစပ်အရသာ ရှိတဲ့ Chicken Broth […]
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်မယ့် Food Fair ပွဲတော် စတော့မယ်
အစားအစာဆိုတဲ့ လူသားတိုင်းရဲ့ သည်းခြေကြိုက်ဖြစ်ပြီးအရသာရှိတဲ့၊ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့အစားအသောက် တွေကြိုက်တတ်သူတွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး အွန်လိုင်းစားသောက်ဆိုင် လမ်းညွှန်ဖြစ်တဲ့ MyLannက အကြီးမားဆုံး Food Fair ကို ဇန်နဝါရီ ၂၄ရက်ကျရင် ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပပါတော့မယ်။ ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၁ဝဝကျော်ပါဝင်ပြီး အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ အစားအသောက်ပွဲတော်မှာ ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊ ချမ်းချမ်း၊ အားတီ၊ ဉာဏ်လင်းအောင်တို့ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုနဲ့အတူ ယူရေနီယံအကအဖွဲ့ကလည်း မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် တင်ဆက်ကြမှာပါ။ နှစ်ရက်ကြာကျင်းပမယ့် ဒီပွဲတော်မှာ ခင်လှိုင်နဲ့ဒိန်းဒေါင်တို့ရဲ့ တင်ဆက်မှုနဲ့အတူ ကံစမ်း မဲအဖြစ် Honda Fitတစ်စီး၊ Samsung Note4၁ဝလုံး၊ Huawei Ascend Mate7၁ဝလုံးအပြင် အခြားဆု မဲတွေလည်း မဲဖောက်ပေမှာမို့ လက်မှတ်ရောင်းရငွေရဲ့ ၁ဝရာခိုင်နှုန်းကို မိဘမဲ့နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ […]
ဆောင်းတွင်းမှာ မျက်နှာလေးကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ။
ဆောင်းတွင်းဆိုရင် မိန်းကလေးတွေအတွက်ကတော့ အသားအရေကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာကို အမြဲတွေးနေရသော ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုပါ။ မျက်နှာလေးက ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ပြုံးပျော်နေစေရင်အတွက်ကတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။ ၀၁. အိပ်ယာမဝင်ခင်မှာ မျက်နှာသစ်ပါ။ အိပ်ယာမ၀င်ခင်မျက်နှာသစ်ပါ။ တနေကုန် သုံးခဲ့ရှိခဲ့တဲ့ မိတ်ကပ်၊နေလောင်ခံခရင်မ်၊ ဘတ်တီးရီးယား၊ ဆဲလ်သေတွေ အညစ်ကြေးတွေနဲ့၊ အဆီတွေကိုသန့်ရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဆပ်ပြာပြင်းတာကိုသုံးရင် သဘာဝအဆီ ကိုရှင်းထုတ်ရာကျပါလိမ့်မယ်။ Soap-free cleansers ကိုသုံးသင့် ပါတယ်။ရေမွှေး၊ ဓါတုပစ္စည်း နှင့် အရက်ပြန်မပါသောပစ္စည်းများကိုရှာသုံးပါ။ ပိုးသတ်ဆေးပါသော ဆပ်ပြာ မျိုးကိုမသုံးသင့်ပါ။ ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းများကိုလဲ အသုံးမပြုသင့်ပါနဲ့လို့ အကြံပေးပါရစေ။ မျက်နှာသစ်နည်းလေးကတော့ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ ၀၀၁. လက်ကိုအရင်ဆေးပါ။ ၀၀၂. စိုနေသောလက်ဖြင့်ရေနဲနဲသုံးပြီး မျက်နှာသစ်ပါ။ အကြောင်းမှာအစိုဓါတ်ရချင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါ တယ်။ ၀၀၃. ဆပ်ပြာခဲကို သေးသေး ၄ ပုံ […]
ပလတာအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဂျုံမှုန့် – ခွက်၂ခွက် နွားနို့(အပူ)(သို့)ရေပူ – ခွက် ၄ပုံ၃ပုံ ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း Baking powder – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က် ပလတာ ပြုလုပ်နည်း ၁။ ဇောက်ပန်းကန်လုံးထဲ (ဂျုံမှုန့်၊ ဆား၊ သကြား၊ baking powder) တို့ကို ထည့်ပြီ ရောမွှေထားပါ။ ၂။ ပြီလျှင် ဆီထည့်ပြီ နွားနို့ကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ထည့်ပြီ ဂျုံဒိုး နူညံ့သည်အထိ သမအောင် လက်ဖြင့် ဂျုံကို နာနာနုယ်ပေးပါ။ ၃။ ပြီနောက် ရောနုယ်ထားသော ဂျုံဒိုးကို အ၀တ်သန့်စိုဖြင့် […]